🥇Best ASIC Brokers ngoJanuwari 2022 | Funda isiKhokelo soRhwebo sokuFunda 2
Abadayisi abaphambili be-ASIC 2021-Funda urhwebo lwe-2
Kukho amawaka wabarhwebi ababonelela ngeenkonzo zezemali kwihlabathi liphela. Ingxaki kukuba ayizizo zonke ezisemthethweni. Ngelishwa, kukho inani elingenakulinganiswa leendawo zabarhwebi abanamandla apho, ngenxa yoko ukwenza umsebenzi wesikolo kubalulekile.
Ngombulelo kule minyaka ingamashumi idlulileyo okanye amagunya karhulumente enze ukuba kube lula ukusekwa kwemibutho yolawulo. Iinjongo zala magunya kukulawula nokulawula isithuba seenkonzo zezemali ukudala indawo enobulungisa necacileyo yotyalo-mali kubo bonke.
Kuhambo lwakho lotyalo-mali, kungenzeka ukuba uhlangane nabarhwebi abaninzi abaphethe iphepha-mvume le-ASIC (iKhomishini yase-Australia, ezoKhuseleko kunye neKhomishini yoTyalo-mali). Le layisenisi ixhaphake ngokukodwa kwisithuba somthengisi we-forex.
Kweli phepha, siza kugubungela yonke into ekufuneka uyazi malunga nabarhwebi be-ASIC. Oku kubandakanya okwenziwa yi-ASIC kunye neemetriki ezibaluleke kakhulu ekufuneka uzikhumbule ngaphambi kokujoyina umthengisi onelayisensi yalo mzimba. Ukuqukumbela, siza kuthetha ngabathengisi abaphambili be-ASIC okwangoku ababonelela ngenkonzo yabo kubathengisi beentengiso kwi-2021.
Eli qumrhu lilawulayo belikho ukusukela ngo-1991, nangona ekuqaleni lalibizwa ngokuba yi-ASC (Khomishini Yokhuseleko yase-Australia). Uphando olwenziwa eWallis lwaqala ngo-1996 ngeenjongo zokuphanda nokuphucula iimeko zezemali, kwanokuguqula ngokutsha indlela yokuziphatha kwezemali nozinzo ngokubanzi.
NgoJulayi 1998, ephenjelelwa luphando oludumileyo olukhankanywe apha ngasentla, i-ASC yaba yi-ASIC esiyaziyo namhlanje. Eli ibilixesha lokuqala ukhuseleko lwabathengi, amaxabiso edipozithi kunye neinshurensi ibibanjelwe ngemicroscope xa kufikwa kutshintsho lokwenyani kumthetho.
Ukukhawulezisa ukuya ku-2009 kunye nolunye uhlengahlengiso oluqhubekekayo lwenziwa. Ngeli xesha ichaphazele indlela abarhwebi be-ASIC abasebenza ngayo kwiimarike zesitokhwe zase-Australia. Imithetho emitsha nengqingqwa yaqala ukusebenza kunye novavanyo olungqongqo kunye nokuhlaziywa rhoqo kweeakhawunti zabarhwebi kunye nokhathalelo lwabathengi.
Olunye utshintsho olwaphawuleka lwaziswa kwicandelo lezemali lase-Australia, kubandakanya iMoneySmart (ethathe indawo yeFIDO kunye nokuqonda iMali). IMoneySmart yinkonzo yasimahla enika abantu iingcebiso ezingenamkhethe, ulwazi kunye nezixhobo zemfundo kunye nezixhobo.
Ngapha koko, oku kwabekwa endaweni ukuze kuyinxalenye yomfanekiso omkhulu-okhusela abatyali mali, kodwa kubanceda nokuba benze ukhetho olungcono lwezezimali kwixa elizayo, oko ke kwandise inzuzo.
BaFumana njani iLayisensi kwi-ASIC?
Impendulo ayisiyiyo ngokulula. I-ASIC isebenza isebenzisa imithetho engqongqo, njengeCCA kunye neCySEC. Ukuqala, bonke abarhwebi kufuneka benze isicelo sephepha-mvume elisemthethweni kwi-AFS (Ukhuseleko lwezeMali lwase-Australia), emva koko i-ASIC iya kuvavanya isicelo eso.
Bonke abathengisi be-ASIC kufuneka balinde ukuvunywa ngaphambi kokuba babonelele ngenkonzo yezemali ngokusemthethweni. Emva koko, umrhwebi kufuneka athobele yonke imiqathango yelayisensi ye-AFS ngokwe 'Corporate Act 2001'.
Emva koku, i-AFS kunye ne-ASIC zivavanya rhoqo amandla enkampani nganye yokubonelela ngeenkonzo zezemali. Oku kubandakanya ukuphanda i-asethi yemali yeqonga, isicwangciso seshishini sefemu kunye neemetriki ezininzi.
Sibeke uluhlu lwezinye zeemeko ezifunekayo kumntu oza kuba ngumrhwebi we-ASIC ukuze afumane ilayisensi.
Ngenisa uphicotho zincwadi
Oku kunokuvakala kucacile, kodwa ukuze ugcine iso kubarhwebi be-ASIC, umthetho uyafuneka ukuba iifemu zingenise uphicotho olwahlukeneyo kunye neenkcukacha emzimbeni. Kananjalo nengeniso yonyaka, olu phicotho-zincwadi kufuneka lubandakanye umthamo wokuthengisa othe kratya weeasethi zemali, amanani e-akhawunti yotyalo-mali, kunye nengeniso yeeasethi ezikumgangatho ophantsi.
Ngaphaya koko, kufuneka babandakanye ubungqina bokubalwa kwemirhumo kunye neenkcukacha ezichaseneyo zomgangatho osetyenzisiweyo kwiiakhawunti. Ukongeza, uphicotho-zincwadi olubandakanya lonke urhwebo olwenziweyo kunye nokuba lwenziwa ngubani. Ngamanye amagama, umrhwebi kufuneka ahlule phakathi kweeyiphi iiodolo ezenziwa ngabaxhasi ngokwabo, kwaye zenziwa ngumbutho wabarhwebi.
I-ASIC ingaphezulu kwelungelo elisemthethweni lokuhlawulisa nayiphi na inkampani ethengisa ukuthengisa engayilandeli imigaqo yayo kwileta okanye ulwazi oluphosakeleyo lophicotho-zincwadi olufunekayo. Ke, njengomrhwebi, awudingi ukuba nexhala malunga nabarhwebi be-ASIC ngokungabi nabuchule. Ngokubalulekileyo, i-ASIC inayo kakhulu imigangatho ephezulu.
Ulwahlulo lweFund Client
Kulo naliphi na ilizwe elineKhomishini ejongene nokulawula icandelo lezezimali - ukwahlulwa kwengxowa-mali yimfuneko esemthethweni. Olu khuselo lwabathengi lwezezimali alukho kubarhwebi kuphela.
Ngokusisiseko, bonke abathengisi be-ASIC banyanzelekile ngokusemthethweni ukuba bagcine iimali zakho zeakhawunti kwiakhawunti eyahlukileyo kuleyo yemali yenkampani. Oku kuthetha ukuba xa inkampani ithe yonakala okanye yaba lixhoba lezenzo ezingekho mthethweni, imali yakho ikhuselekile kwaye ivakala.
Ngokubanzi, umthengisi ozimeleyo ozimeleyo uya kubamba imali yokwahlulahlula, kwaye loo mntu uya kuba noxanduva lokuyibuyisela kuwe le mali.
Xa kufikwa ekugcineni imali yakho ikhuselekile, ii-ASIC brokers ziyacetyiswa ukuba zidibane kuphela ne-tier-1 bank (oko kuthetha ukuba iibhanki ezinamanqanaba amakhulu emali). Ngapha koko, i-tier-1 yebhanki ebambe imali yeakhawunti yakho mayingabi ngandlela zonke idityaniswe nomrhwebi, naphantsi kwazo naziphi na iimeko.
Ukuxelwa okuPheleleyo kwabaThengi
Abarhwebi kulindeleke ngokusemthethweni ukuba bancede abathengi bathathe izigqibo ezinolwazi ngokusekwe elubala, ubulungisa, kunye nobungcali obugqibeleleyo. Zonke iimarike zezemali kufuneka zilungelelane kwaye zibekeke xa kuthengiswa imveliso kuluntu.
Ngamanye amaxesha ubizwa ngokuba 'kukuchazwa komngcipheko', umthengisi wakho we-ASIC ucelwa ngumthetho ukuba abhengeze ngokupheleleyo nayiphi na imali ehlawulwa kwifemu. Umzekelo woku iya kuba kukucaciswa kobume bekhomishini kunye nemirhumo yokungasebenzi enokuthi isebenze ukuba awusebenzisi iakhawunti yakho inyanga.
Ngaphezulu koku, kuya kufuneka wazi ngayo nayiphi na imali yentengiselwano, kubandakanya nokuxhasa ngezimali ii-CFDs ubusuku bonke. Ayingabo bonke abathengisi be-ASIC ababiza yonke intlawulo phantsi kwelanga, kodwa nokuba kunjalo, umboneleli kufuneka abe selubala ngokupheleleyo malunga nolwakhiwo lwamaxabiso.
Uya kuhlala ufumanisa ukuba kufuneka ufunde iphepha elinxulumene nesiqinisekiso sakho sokuqonda, ngamanye amaxesha ekubhekiswa kuso 'njengefomu yokuqinisekisa abathengi'. Ixesha elifutshane nelifutshane kuyo-ngokomthetho, umthengisi we-ASIC kufuneka achaze yonke imirhumo enokuthi isebenze kuwe.
Isisombululo esanelisayo sempikiswano yangaphakathi yenye into eyimfuneko kwezomthetho kubarhwebi be-ASIC. Kananjalo lo ngomnye umgangatho onyanzelekileyo emzimbeni.
Inani elaneleyo leNkunzi
Ngokwenqanaba le-ASIC, abathengisi abanamaphepha-mvume kufuneka okungenani babe nesigidi esinye seedola zaseAustralia kwiakhawunti yebhanki yomzi. Oku kufuneka kube njalo ngaphambi kokuba kunikeze iinkonzo zemali kuluntu.
Umthetho wase-Australia we-AML / CTF
I-AML imfutshane malunga 'nokuGunyazwa kweMali ngokuChaseneyo', ngelixa i-CFT imele 'Ukulwa ukuxhaswa ngezimali kobugrogrisi'. Le yenye yemfuneko yolawulo kuye nawuphi na umthengisi we-ASIC. Ngokusisiseko, icandelo le-AML / CTF linoxanduva lokuphelisa ubugrogrisi, ukuxhaphaza imali, ubuqhetseba kwezemali, ubusela besazisi kunye nolunye ulwaphulo-mthetho olunobuzaza.
Ngale nto engqondweni, abathengisi be-ASIC kufuneka benze inkqubo ye-KYC-sisichazi esithi 'Yazi uMthengi wakho'. Ngamafutshane, esi sizathu kufuneka unikezele ngolwazi kunye nobungqina bokuba ungubani.
I-KYC ibandakanya ukurhweba ngokuthengisa igama lakho elipheleleyo kunye nedilesi yasekhaya, isazisi sefoto ngohlobo lwepasipoti okanye iphepha-mvume lokuqhuba, umvuzo wenyanga kunye namava okuthengisa Inkampani kufuneka yenze lo msebenzi kunye nomthengi ngamnye.
Kuyafana nakwi-FCA kunye nabathengisi beCySEC. Ngapha koko, lo ngowona mgangatho mhle kakhulu kwibhodi. Ngamanye amazwi, akukho mthengisi we-ASIC onelayisensi oya kuthi akubhalise ngaphandle kokuya ngale nkqubo. Ukuba uvumelekile ukubhalisela ukurhweba ngaphandle kwesazisi sefoto, oko kuya kuba yiflegi ebomvu xa isiza kwinkampani.
Ngoku, masithi umthengisi we-ASIC ukrokrela umthengi. Ukukunika umzekelo; Cinga ukuba umthengi uhlala efaka i-avareji ye- $ 1k ngenyanga. Ngequbuliso, umtyalomali ofanayo uqala ukufaka i $ 20ka ngenyanga. Nangona kunokubakho isizathu esisemthethweni sotyalo-mali oluphezulu, umrhwebi kufuneka axele lo msebenzi kulawulo lwe-AML / CTF yase-Australia.
INgxelo ePheleleyo yeNkuthalo
Ingxelo yokukhuthala efanelekileyo kufuneka ibandakanywe kwisakhelo senkampani yomthengisi. Abarhwebi be-ASIC baphantsi kophononongo oluqhelekileyo oluvela kumzimba olawulayo, onengqiqo-emva kwabo bonke njengabagcini babatyali mali.
Sitshilo nje ukuba ukuba umthengi utshintshe kakhulu indlela atyala ngayo, abarhwebi be-ASIC kulindeleke ngokusemthethweni ukuba bayixele. Nangona kunjalo, ayipheleli apho. Ukongeza koku, umrhwebi kufuneka ahambe kwinkqubo yophando. Oku kubandakanya ukufumanisa ukuba imali ithathwe phi. Oku kubandakanya ukuvelisa ingxelo ecacileyo yokukhuthala kubandakanya zonke iziphumo zophando. Le yenye yeendlela i-ASIC elawula ngayo kunye nokuthintela ukuxhaphaza imali kunye nolwaphulo-mthetho kwezemali.
Ngayo yonke le nto ingentla engqondweni, abarhwebi abaphambili be-ASIC kufuneka babonise ukuqonda okucacileyo kokuvelisa 'iprofayili yomngcipheko wabathengi' ukoneliseka yikhomishini yolawulo.
Iimbambano zolawulo lomdla
Okokuqala, ngokwesikhokelo esilawulayo 'i-181', abarhwebi be-ASIC kufuneka bakuphephe ukujongana naye nawuphi na umthengi apho kunokubakho ukungqubana kwemidla. Ukuba kukho ukungqubana kwemidla, umrhwebi kufuneka anike ubungqina bokulawulwa kwempixano.
Ngokubonelela ngolwakhiwo longquzulwano ngaphakathi kwenkampani, umnini-layisenisi akazukubeka esichengeni ukuma kwemali okanye ukuthembeka. Umbono onongquzulwano lwemali yenzala 'kukulawula', 'ukunqanda', kunye 'nokuveza' nakuphi na ukungqubana okunokubakho komdla.
Ukhuseleko lwe-ASIC Broker
Ikhomishini iyabakhusela abatyali mali ngeendlela ezininzi. Okokuqala nokuphambili-baqinisekisa ukuba nawuphi na umthengisi we-ASIC othembela kuye ngemali yakho ucacile kwaye usebenzisa inkonzo yabo ngaphakathi komthetho. Oku kudala ukuthembana kwabatyali mali kunye nokuzithemba kwindawo yemali.
I-ASIC ikwazibophelele ekukhuseleni abarhwebi kuthengiso lwentengiso, kunye neenkqubo zemfundo yezemali ezinje ngeMoneySmart (njengoko bekutshiwo ngaphambili) enceda abatyali mali balawule imali yabo.
Kwimeko apho inkampani yomrhwebi isiya kupheliswa, i-ASIC inesikimu sembuyekezo esisendaweni. Oku kukunceda ukuba ufikelele kuyo nayiphi na imali 'elahlekileyo'. Ngapha koko, eli qumrhu liyazibophelela xa kufikwa kunyanzeliso lweekhowudi zokusebenza.
Kwimeko engemnandanga apho kufuneka wenze isikhalazo malunga nomthengisi we-ASIC, emva koko uyakwazi ukunxibelelana ngqo ne-ASIC. Ikhomishini ikwalandela naziphi na iingxelo zobugebenga nolwaphulo-mthetho. Oku kubalulekile ekugcineni ingqibelelo.
I-ASIC Brokers: IiAsethi eziHambelanayo
Kukho amaqonga athile anikezela ngeeklasi ezimbalwa zeasethi. Emva koko unabarhwebi be-ASIC ababonelela ngeenkonzo ze-asethi nganye phantsi kwelanga. Kananjalo, kuya kufuneka usoloko ujonga ukuba yeyiphi na impahla oyithandayo exhaswa liqonga lakho ngaphambi kokuba ubhalise.
Nangona kunjalo, ukuba awukaqiniseki ukuba loluphi uhlobo lweasethi ongathanda ukuyithengisa, sidibanise uluhlu lwezixhobo ezibonwa rhoqo ezinikezelwa ngabathengisi abaphambili be-ASIC.
I-CFD (ikhontrakthi yomahluko)
Ukuma kwayo, iiCFD zinokuthengiswa, kodwa kuye kwakho intetho malunga nokutshintsha kakhulu ukufikelela kubathengi abathengisa phantsi komgaqo weASIC. Izithintelo ezinokubakho zibandakanya ii-caps zokunyusa kunye nemithetho emitsha yentengiso Emva kophando, amagosa afumanise ukuba inani eliphezulu labathengi lithe izikhundla zabo zeCFD zavalwa ngokungekho sikweni ngabarhwebi, nakwixabiso elisezantsi elisezantsi.
Njengokuba olu tshintsho lungakhange lube neziqhamo okwangoku, kwaye ezi zinto zinokuthatha iminyaka ukuzenza, siza kuchaza ngokufutshane ukuba zisebenza njani iiCFD nomthengisi weASIC.
Njengoko unokwazi, iiCFD zisebenza ngokuqikelela amaxabiso exesha elizayo lwezixhobo ezahlukeneyo zokurhweba. Umzekelo, unokukhetha ukuqikelela ukuhamba kwamaxabiso esitokhwe kunye neeparts zangaphambili. Ukuba ucinga ukuba intengo yentengiso ikukuhla okuya ezantsi, 'uya' kuthengisa 'okanye' uza kufutshane '. Ukuba uziva ukuba ixabiso lentengiso liya kunyuka, uya 'kuthenga' okanye 'uye kude'
Xa uthengisa kwii-CFDs, awuyi kuba ngumnini we-asethi uqobo. Endaweni yoko, i-CFD inoxanduva lokulandela umkhondo wexabiso lokwenene lesixhobo. Umzekelo, ukuba ixabiso lesitokhwe sakwaNike sonyuka nge-1.25%, njengoko kunjalo nakwi-CFD. Ngokubalulekileyo, ukurhweba nge-CFD kuthetha ukuba unokubanakho ukwenza inzuzo 'ngokusilela' kwaye 'Ukuhamba ixesha elide'.
Uninzi lwabathengi be-ASIC, awuyi kuhlawula nayiphi na imali yekhomishini kwii-CFD. Kuxhomekeka kwiqonga, iiCFD zinokukunika ukufikelela kulwelo oluphezulu kwimarike Forex. Ungasathethi ke ngezabelo, igolide, ioyile, izalathiso, ii-cryptocurrensets nokunye okuninzi!
Forex (Utshintshiselwano lwangaphandle)
Uninzi lwabarhwebi be-forex bajonge kwi-ASIC okanye kwi-FCA xa kufikwa ekufumaneni iphepha-mvume. Ewe kunjalo, ngaphambi kokuba wena urhwebe nge-forex kufuneka ubenomrhwebi osemva kwakho. Ngaphandle komthengisi ukuze ubeke iodolo egameni lakho, awuyi kuba nakho ukufikelela kwiimarike zemali zehlabathi.
Zintathu iindidi zemali ezibini kwaye 'ziyi-exotic', 'zincinci' kunye 'neejors'. Kulabo abangaziyo, nceda ufumane apha ngezantsi imizekelo nganye:
Iibhanki zemali zangaphandle - I-GBP / ZAR, i-EUR / ZAMA, i-USD / i-THB, i-JPY / i-NOK, i-AUD / MXN
Iiparitha ezincinci zeMali - I-EUR / AUD, i-EUR / i-GBP, i-CHF / i-JPY, i-NYZ / i-JPY, i-GBP / i-CAD
Izibini ezikhulu zeMali- I-GBP / i-USD, i-EUR / i-USD, i-USD / i-JPY, i-USD / i-CHF
Sebenzisa i-ASIC broker ukurhweba nge-forex kuthetha ukuba ungathenga kwaye uthengise ngababini bemali ngonqakrazo lweqhosha. Le ntengiso yehlabathi ivulekile iiyure ezingama-24 ngosuku kunye neentsuku ezisixhenxe ngeveki, kwiimbombo ezahlukeneyo zehlabathi.
Xa kuziwa kwi-FX, ukuba ufuna ukuba ngumrhwebi wezandla, sicebisa ukuba ujonge iqonga elinikezela ngeendaba zexesha-mali, iitshathi zamaxabiso, uhlalutyo lobuchwephesha kunye nezixhobo zemfundo.
Iimarike zorhwebo zivulelwe ukuthengisa iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezisi-7 ngeveki. Le asethi iwela ngokweendidi ezintathu- 'amandla', 'isinyithi', kunye 'nezolimo'. Nceda ufumane apha ngezantsi eminye imizekelo yohlobo ngalunye lwempahla yorhwebo.
Amandla: i-oli ekrwada, ukufudumeza ioyile, igesi engenamntu, igesi yendalo, ipetroli kunye neoyile yokufudumeza njl
Isinyithi: i-aluminium, isilivere, i-palladium, igolide, i-platinum kunye nobhedu njl
Ezolimo: ihabile, umbona, umqhaphu, ingqolowa, uboya, iimbotyi, irayisi njl.
Abanye abathengisi bakholelwa ekubeni uhlala unezinto ezithile kwiphothifoliyo yakho yorhwebo wongeza iyantlukwano kwaye unciphisa umngcipheko ngokubanzi.
Nditsho nabantu abangazange bathengise usuku ebomini babo bevile ngeesitokhwe kunye nezabelo. Ewe kunjalo, ngoku yenziwe kwi-Intanethi. Ukwabelana ngesabelo kuvumela abatyali mali ukuba bathenge kwaye bathengise izabelo kumashishini (umzekelo; Icuba laseBritane laseMelika, iHSBC, iAmazon).
Buza kunye nebhidi 'sasazaKolu hlobo lweeasethi kubonisa umahluko phakathi kwento umthengisi ezimisele ukuyamkela ukuze ayithengise, kunye nomthengi azimisele ukuyihlawula. Olu hlobo lweeasethi alukuvumeli ukuba uthengise kuphela izabelo usebenzisa i-LSE (iLondon Stock Exchange), kodwa uphinde utyale imali yakho kwiinkampani ezikumazwe aphesheya.
Ngaphaya koko, ukuba awufuni ukuthenga lonke isabelo kwi-Adidas umzekelo, ezinye iinkampani zenza ukuba abatyali mali bathenge iqhekeza lesabelo. Kukho ii-3 eziqhelekileyo ezibonwa ngabathengi be-ASIC kwaye zezi zilandelayo.
Ukukhetha: Olu hlobo lomrhwebi luya kuthengisa egameni lakho ukuze unganyusi umnwe. Ifemi ithatha indima yokwenza konke ukuthenga / ukuthengisa ukuzama, nangona kunjalo, yazi imali eyongezelelweyo ehlawulwa ngomsebenzi owongezelelweyo owenziweyo.
Ukubulawa: Umrhwebi osebenzayo ubeka nje iiodolo xa ubayalela ukuba benze njalo.
Iingcebiso: Ukuba ufuna isikhokelo esincinci, kodwa awufuni msebenzi wokurhweba ongacacanga, umthengisi weengcebiso unokuba lolona khetho lufanelekileyo kuwe. Umrhwebi uyakukucebisa ukuba zeziphi izabelo ezinokuba luncedo kuwe xa uthenga okanye uthengise. Ngapha koko, umthengisi we-ASIC uza kwenza kuphela ukuthenga okanye ukuthengisa ngemvume yakho.
Zingaphaya kwamawaka amabini iintlobo zeedigital cryptocurrencies kwimarike, ke ngekhe kulunge ukudwelisa zonke. Ngale nto ithethwayo, apha ngezantsi uyakufumana uluhlu lwee-cryptocurrensets ezihlala zibanjwa ngamaqonga orhwebo e-ASIC.
Xa kuziwa kwi-cryptocurrensets, sicinga ukuba licebo elinengqiqo lokusebenzisa ngokupheleleyo i-akhawunti yedemo kwiqonga lomthengisi le-ASIC. Ngelixa ungazukukwazi ukusebenzisa iakhawunti yedemo kunaniselwano lwangempela, yindlela ebalaseleyo yokuziqhelanisa nokuqhuba ngaphambi kokuba uqale utyalomali usebenzisa imali yokwenyani.
Abantu abatyala imali kwii-indices benza inzuzo ngokuqikelela ngokuchanekileyo ukunyuka kwamaxabiso endices. Unokujolisa kwisalathiso esinye, okanye ungarhweba ngeendlela ezininzi. Iimpawu zibonisa 'zibonisa' utshintsho lwamaxabiso esitokhwe ezininzi ezidweliswe kutshintshiselwano oluthile. Umzekelo, i-FTSE 100 imele iinkampani ezinkulu ezili-100 kwiLondon Stock Exchange.
Ukutshintsha kwexabiso kwisalathiso ngu nganiswa ngamanqaku kunye ihamba ngamanqaku. Ngokuchasene nezinye iiasethi kuluhlu lwethu, awunakho ukutyala ngokuthe ngqo isalathiso. Endaweni yoko, kufuneka yenziwe ngabathengisi be-ASIC ababonelela ngee-CFDs, zexesha elizayo okanye ii-ETFs.
Ukukhetha i-ASIC Broker
Isinyathelo sokuqala sokufumana umthengisi omkhulu kukufumana enye ephethe ilayisenisi evela kwikhomishini yolawulo ehloniphekileyo njenge-ASIC. Iqonga labarhwebi libonisa ilayisenisi ngokuzingca ngenxa yoko akufuneki ukuba wenze umba omninzi wokufumanisa ukuba ngubani olawula inkampani.
Ngokuthembela kuphela kwimali oyisebenzele nzima kunye nabarhwebi abalawulwayo uyazi ukuba imali yakho igcinwe ikhuselekile kwaye ngaphandle kwenkampani ngokwahlula imali. Ukongeza, unoxolo lwengqondo lokuba inkampani kufuneka ilandele imigaqo engqongqo yokunikezela ngenkonzo yayo.
Kukho iitoni zabathengisi be-ASIC kwisithuba se-Intanethi, ke kunokuba yinkqubo eyoyikisayo yokufumana elungileyo. Ngale nto engqondweni, sidibanise uluhlu lokuqwalaselwa xa usenza uphando lwakho lomthengisi we-ASIC.
Xa kuziwa ekwenzeni inzuzo efanelekileyo yokurhweba, ukusasazeka kwenza umehluko omkhulu. Ngamafutshane, lo ngumsantsa ophakathi kokuthenga nokuthengisa ixabiso leasethi, njengoko kubonisiwe kusetyenziswa 'iipipi'
Masithi isibini semali i-GPB / i-USD sisasazeke ngeepipi ezi-6. Ukuze wenze inzuzo, kuya kufuneka ukhule utyalo-mali lwakho ngaphezulu kweepipi ezi-6.
Olu lolunye uqwalaselo xa ukhetha umthengisi olungileyo we-ASIC, kodwa kwakhona inkampani nganye iya kwahluka. Amanye amaqonga e-broker awahlawulisi nayiphi na imali ye-commisson kodwa aya kwenza imali ngokusasazeka. Abanye banokukuhlawulisa intlawulo kuyo yonke into oyithengayo okanye oyithengisayo. Le ntlawulo kufuneka ihlale icaciswa kuwe njengomthengi.
Njengomzekelo, khawufane ucinge ngale meko ilandelayo:
Masithi uthengisa i-GBP / i-USD
Umrhwebi wakho ubiza intlawulo yekhomishini eyi-0.6%
Ugqiba ekubeni utyale imali eyi- $ 2,000
Umthengisi we-ASIC uza kuthatha i- $ 12 kwimirhumo yorhwebo
Izixhobo zobuchwephesha ngokuqinisekileyo ziyahluka ukusuka kwisiza ukuya kwisiza, kodwa kukukunika umbono wokuba ufanele ujonge ntoni kudwelise ezona zikhombisi ziluncedo zinikezelwa zii-ASIC brokers.
Icandelo lokuba ngumrhwebi onenzuzo ngokudibanisa ezi zixhobo nolawulo lwemali kunye nesicwangciso esihle. Kwakhona iiakhawunti zedemo zibaluleke kakhulu xa ufumana iinyawo zakho ngezalathi zobuchwephesha ezinje ngentla.
Izixhobo zoRhwebo kunye nezixhobo zeMfundo
Awona maqonga mahle okuthengisa anikezela ngolwazi kunye neenkcukacha zembali kubathengi. Kubatyalomali, ukufunda ngentshukumo yamaxabiso kunokuba luncedo ngokwenene xa kuziwa kuqikelelo lwekamva.
Isizathu sokuba, imikhwa ihlala iphinda, ke ukubuyela umva kunye nokuvavanya izixhobo zorhwebo ezichazwe ngaphambili ziluncedo kakhulu ekuqikeleleni ulwalathiso lwentengiso.
Ukongeza, ukuba ufuna ukuzama inkqubo yorhwebo oluzenzekelayo qiniseka ukuba umthengisi wakho uxhasa isoftware yomntu wesithathu efana nayo MT4. Olunye uqwalaselo olubalulekileyo xa ukhetha umthengisi we-ASIC yindlela ekhawuleziswa ngayo ukwenziwa kwee-odolo. Kuxhomekeke kuhlobo luni lweakhawunti oyivulileyo, iiodolo zakho zinokuphunyezwa ngokukhawuleza njengeemilisecond. Oku kunokuba nefuthe elikhulu kwisicwangciso sakho sotyalo-mali.
Ngaphambi kokuba uye phambili kwaye ubhalisele i-ASIC broker, kuyacetyiswa ukuba uphande iqonga ngakumbi ngokufumanisa ukuba zeziphi iiasethi ezikhoyo. Oko ukunandiphayo ukurhweba ngoku kunokutshintsha ngakumbi ezantsi emgceni. Ke ukuba ufuna ukwahlula ipotifoliyo yakho yotyalo-mali kamva kulungile ukwazi ukuba uneeklasi ezininzi zeasethi onokukhetha kuzo.
Ukuba yi-forex ojolise kuyo, ke qiniseka ukuba uyaziqonda ukuba zeziphi izibini zemali eziya kubakho ukuze uthengise. Umzekelo, ngelixa amanye amaqonga e-broker abonelela ngabantwana, ii-majors kunye ne-exotic-ezinye zigxila kuphela kwisibini esincinci.
Uninzi lwabathengisi be-forex baya kukuxelela ukuba abarhwebi abaphambili be-ASIC ngabo banoluhlu olubanzi lweeklasi zeeasethi ezikhoyo, kwimeko apho ufuna ukwandisa iphothifoliyo yakho kamva.
Inkxaso yabathengi ngokuqinisekileyo yinto ebalulekileyo xa ukhetha iarhente elungileyo yomthengisi. Imeko efanelekileyo kukuba uburhwebi bufumaneka nge-24/7 ngenkxaso ukuba uyayifuna nini kwaye nini.
Umzekelo, ngeemarike ezinje ngeempahla kunye ne-forex evulekileyo 24/7, kunokuba yinto encinci ukuba ufuna uncedo ngokuhlwa kwangoMgqibelo kwaye bekungekho mntu ukuncedayo okanye akucebise.
Abona bathengisi babalaseleyo kwi-ASIC banikezela ngeendlela ezahlukeneyo zonxibelelwano ezinje nge-24/7 yengxoxo ephilayo, i-imeyile, inkxaso yefowuni kunye nefom yoqhakamshelwano.
Wonke umrhwebi we-ASIC wahlukile kwisebe lediphozithi / lokurhoxa. Ngelixa abanye benokwamkela uninzi lweendlela zokuhlawula, abanye banokwamkela kuphela ugqithiso lwebhanki yesiko.
Ukuba unendlela yokuhlawula engqondweni ofuna ukuyisebenzisa, kuya kufuneka ujonge ukuba inkampani iyayamkela na. Olona khetho luqhelekileyo lubonwa njengekhadi letyala / lokuthenga, ukuhanjiswa kwebhanki, kunye nezipaji ze-e ezinje ngeNetteller, iPayPal kunye neSkrill.
Protocol yokuTsala / yokuRhoxisa
Ucinga ukuba ufumene umrhwebi owamkela indlela oyikhethileyo yokuhlawula, ngoku kuya kufuneka ujonge kwezinye iindlela. Umzekelo, jonga ukuba umrhwebi uhlawulisa nayiphi na intlawulo yedipozithi.
Ngapha koko, kuya kufuneka ujonge umgaqo-nkqubo wokurhoxa weqonga. Ngokufanelekileyo, umthengisi we-ASIC uzakuqhubekeka nezicelo zokurhoxa ngaphakathi kweentsuku ezi-2 zomsebenzi, ukuba ayikhawulezi. Oku kuxhomekeke kwindlela oyisebenzisayo yokuhlawula.
Xa kuziwa kwiakhawunti, yimivumbo eyahlukeneyo yabantu abahlukeneyo. Kukho iintlobo ngeentlobo zeeakhawunti zabarhwebi ezikhoyo, kwaye iqonga ngalinye liya kwahluka kwinto abanayo.
Ukuba ungumrhwebi ongumlandeli wenkolo yamaSilamsi, kuya kufuneka ufumane umthengisi we-ASIC onikezela ngeAkhawunti yamaSilamsi. Le akhawunti iya kulungiswa ukuze abarhwebi bahlale bethembekile kwinkolo yabo nakwi-Sharia Law (ethintela ukunika nokufumana inzala).
Ukuba umrhwebi akabhengezi iakhawunti yamaSilamsi ngokuthe ngqo, kunokuba kufanelekile ukuba unxibelelane neqonga. Isizathu sokuba abanye abathengisi be-ASIC bazimisele ukulungelelanisa iiakhawunti ezisemgangathweni ukuze zihlangabezane neemfuno zakho.
Iakhawunti esemgangathweni iyaziwa kakuhle phakathi kwabatyali mali, kodwa kubaqalayo okanye abathengisi abangathandi ukubeka emngciphekweni imali eninzi, kukho 'iNano', 'iMicro', kunye 'neeMini' iiakhawunti. Ukuba ungathanda ukuzama le ndlela yokuthengisa, emva koko nxibelelana nomthengisi we-ASIC onomdla- banokulungisa iakhawunti esemgangathweni ukuze ikulungiselele.
Ungasayina njani ubhalise kwi-ASIC Broker namhlanje
Okwangoku, uya kuba nokuqonda okunzulu ngakumbi kungekuphela nje ngendlela i-ASIC ekukhusela ngayo njengomrhwebi, kodwa kunye nokuba ujonge ntoni xa ukhetha iqonga. Ukuba awukafumani umboneleli ofanelekileyo, uyakufumana uluhlu lwethu lwabathengisi abaphambili be-ASIC be-2021 ezantsi kweli phepha.
Ukuze uqalise, sibeke ndawonye inyathelo ngenyathelo lesikhokelo sokutyikitya kwindawo yokurhweba ye-ASIC namhlanje!
Inyathelo 1: Bhalisa phezulu
Okokuqala, kufuneka ubhekise kwiwebhusayithi yomthengisi oyikhethileyo ye-ASIC. Khangela iqhosha / uphawu 'lokubhalisa'.
Okulandelayo, kuyakufuneka ufake idilesi yemeyile yakho kwaye wenze ipassword eyahlukileyo kuwe.
Inyathelo 2: Chonga / wazi uMthengi wakho (KYC)
Njengokuba besesichazile ngaphambili ngokwemigaqo nemigaqo ye-ASIC-abathengisi kufuneka ngokomthetho bafumane ubungqina besazisi kuye nakumthengi ngamnye.
Umrhwebi uya kufuna iikopi zepasipoti yakho okanye ilayisensi yokuqhuba, elandelwa yibhili yaseburhulumenteni enegama lakho nedilesi yakho (ubukhulu becala- ityala eliyilwayo kwiinyanga ezi-3 ezidlulileyo lanele). Elinye icandelo elikhulu le-KYC yimfuneko yokuqonda ingeniso yakho yenyanga, umvuzo kunye nembali / amava amafutshane otyalo mali.
Inyathelo 3: Faka ezinye iiNgxowa-mali
Ngoku uza kucelwa ukuba ufake imali.
Izinketho zokuhlawula ziyafumaneka kumaqonga e-ASIC broker zihlala zilandelayo:
Iipaji ze-E ezinje ngeSkrill kunye neNeteller
Ukudluliselwa kweengcingo zebhanki
Njengoko besigqibile ngaphambili, kubalulekile ukujonga ubukho bendlela oyikhethileyo yokuhlawula ngaphambi kokuba ubhalise.
Inyathelo 4: Qalisa ukuthengisa
Nje ukuba idiphozithi yakho yenziwe, ulungile ukuba uza kuhamba. Ukuba awukazithembi ngokwaneleyo ukuba ungarhweba ngemali yakho, licebo elilungileyo ukusebenzisa iakhawunti yedemo. Abarhwebi be-ASIC bahlala bebonelela naphi na phakathi kwe- $ 10,000 kunye ne- $ 100,000 kwimali yedemo.
Abarhwebi abaGqwesileyo be-ASIC ka-2021
Ngeli nqanaba, sizigubungele zonke izinto ezibalulekileyo ekufuneka sijongile xa ukhetha oyena broker we-ASIC kwiimfuno zakho.
Nceda ufumane ezimbalwa zabathengisi abaphambili be-ASIC ezidweliswe ngezantsi ukuze uziqwalasele ngononophelo, zonke ezo zilayisenisi ezilawulwa ngokupheleleyo.
1. I-Avatrade-Uninzi lwee-Asethi ezinesiko
I-AvaTrade yenye ye-ASIC broker esekwe kuluhlu lwethu kwaye ibisebenza ukusukela ngo-2006. Inkampani ijonge ukutsala abatyali mali kuwo onke amanqanaba amava. Eli qonga linabathengi abangaphezu kwama-200,000 kwiincwadi zalo kwaye abo batyalomali benza ukurhweba kwezigidi ezi-2 kwisiza rhoqo ngenyanga.
Umthengisi we-ASIC uxhasa amaqonga amaqela esithathu, anje ngeMetaTrader4 / 5, umthengisi weMirror, kunye neZuluTrade. Ukuqala ngokurhweba nge-AvaTrade kufuneka ubeke i-100 yeedola. Izinto zexabiso zesiko zibandakanya i-cryptocurrensets, iibhondi, izabelo, ii-ETFs, ii-indices, kunye nezinto zorhwebo- zonke zikwimo yeeCFD
Xa kuziwa kwi-forex, i-AvaTrade ibeke amandla kwi-1: 20 yabantwana kunye ne-1: 30 yee-majors. Ii-indices ezinkulu kunye negolide zinqunyelwe kwi-1: 20. Imali ye-equity ikwi-1: 5 nakwii-cryptocurrensets kwi-1: 2.
Kukho ngaphezulu kwe-50 yeebhangqa zemali ekunikezelweni kwiAvatrade- kunye neBitcoin, iCash Bitcoin, iLitecoin, iBitcoin yeGolide, iRipple, i-EOS, iDash, kunye ne-Ethereum. Le broker firm ineeofisi ezili-11 kwihlabathi liphela kwaye ineelayisensi ezivela kwi-ASIC, FSP (eMzantsi Afrika), IIROC (Canada), kunye ne-FSA (Japan), ke unokuqiniseka ukuba iyaziwa kwaye iphantsi kolawulo olungqongqo oluvela kwimibutho eyahlukeneyo.
Iakhawunti yedemo iyafumaneka
Ubambe ilayisensi kwizigqibo ezininzi
$ 100 idiphozithi encinci
Inkqubo yokurhoxa kancinci xa ithelekiswa nabanye
Ukusuka kukhangelo olulula lwe-intanethi, uya kubona ukuba kukho iitoni zamaqonga ama-broker athembisa ukubonelela ngenkonzo enkulu kubatyali mali. Ingxaki kukhetho oluninzi kukuhlela ingqolowa kumququ. Indawo yokuqala ukuqala kukuqinisekisa ukuba umrhwebi unelayisensi epheleleyo kwaye ulawulwa yikhomishini yelayisensi ehloniphekileyo efana ne-ASIC, i-FCA okanye iCySEC.
Ngokwenene le kuphela kwendlela yokwazi ukuba imali yakho ikhuselwe kwaye awusebenzi nenkampani enobukrwada. Elinye icebo xa ukhetha umrhwebi kukwenza umsebenzi wakho wesikolo ngokwendlela yekhomishini, ukurhoxa kunye nemirhumo yedipozithi esebenzayo, kwaye isasazeke.
Njengoko besesitshilo, iiakhawunti zedemo ziyindlela ebalaseleyo yokufumana iinyawo zakho kwiimeko zentengiso ephilayo ngaphandle kokuchitha imali yakho yokwenyani. Ikwayindlela entle yokuzama iindlela ezintsha.
Yintoni umthengisi we-ASIC?
Umthengisi we-ASIC ngumrhwebi ophethe iphepha-mvume kumzimba olawulayo i-ASIC (iKhomishini yoKhuseleko kunye neKhomishini yoTyalo-mali yase-Australia). Oku kuthetha ukuba umrhwebi kufuneka alandele imigaqo kunye nemigaqo yentengiso efanelekileyo yokuthengisa kubo bonke.
Ndingabusebenzisa ubungakanani kumthengisi we-ASIC?
Ewe. Uninzi lwabathengi be-ASIC ungasebenzisa amandla, kodwa yazi nje ukuba imida yakho inokubanjiswa.
Zeziphi iiasethi endinokuzithengisa nomthengisi we-ASIC?
Zeziphi iiasethi ezikhoyo ekugqibeleni zixhomekeke kumthengisi we-ASIC omkhethileyo. Abanye abathengisi bajolise kuphela kwiiklasi ezimbalwa zeeasethi ngelixa abanye benokunikela ngayo yonke into phantsi kwelanga. Ke soloko ujonga olu lwazi ngaphambi kokuntywila.
Kutheni le nto ndifuna ukuthumela iikopi ze-ID yam kumrhwebo we-ASIC?
Impendulo emfutshane-ngumthetho. Ngokwe-ASIC 'Yazi umThengi wakho' imigaqo, onke amafemu e-broker kufuneka achonge ngamnye umthengi esebenzisa umbono weefoto kunye nokutshekishwa.